Minisitry ny Fitsarana : « hisokatra ny fitsarana ao Ikongo » | NewsMada
Minisitry ny Fitsarana : « hisokatra ny fitsarana ao Ikongo »
« Mampahafantra ny besinamaro ny minisiteran’ny Fitsarana fa hisokatra sy hiasa ny fitsarana ambaratonga voalohany any Ikongo, manomboka ny 26 febroary », hoy ny minisitry ny Fitsarana, Rasolo Elise Alexandrine, teny Faravohitra, omaly, momba ny fitsarana any Ikongo, faritra Vatovavy Fitovinany.
Efa misy mpitsara roa sy mpirakidraharaha telo namita iraka nalefa any Ikongo mba hampihodina ny fitsarana any an-toerana. Hotendren’ny Filankevitra ambony momba ny mpitsara (CSM) miandalana kosa ireo mpitsara raikitra tokony hiasa any.
Niverina koa ny fampandehanan-draharaha ao amin’ny fonjan’Ikongo, nanomboka 4 janoary, fotoana nanendrena ny lehibe vaovaon’ny fonja. Amin’izao fotoana izao, miisa 16 ireo mpandraharaha fonja miasa any, ka 15 ny miandraikitra ny fiambenana ny fonja. Mitohy hatrany ny fitadiavana ireo voafonja rehetra izay tafavoaka fonja.
Raha tsiahivina, enim-bolana eo ho eo no nikatonan’ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Ikongo noho ny fisian’ny hetsika fitsaram-bahoaka. Voafonja 25 amin’ireo 125 izay nisy namoaka no efa niverina.